अमेरिका र इरान बीच यु्द्ध हुन लागेको हो ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
अमेरिका र इरान बीच यु्द्ध हुन लागेको हो ?
२०७६ वैशाख २५ बुधवार
वासिङ्टन। मध्यपूर्व्स्थित अमेरिकी सुरक्षाबलको ठेगानामा हमला हुने आंशकामा अमेरिकाले एक युद्धपोत त्यस क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ। इरानलाई एक स्पष्ट र सीधा सन्देश दिन उक्त युद्धपोत तैनाथ गरिएको अमेरिकाले जनाएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले कैयौं दुःख दिने र उक्साउने खालका संकेत तथा चेनावनीको जवाफमा ट्रम्प प्रशासनले यो फैसला लिएको बताए। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अमेरिकी अधिकारीले मध्यपूर्व्स्थित अमेरिकी बलका ठेगानामा हमला हुने आंशका बढिरेहका कारण अमेरिकाले उक्त कदम उठाएको बताए ।
यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले आफ्नो युरोप यात्राका क्रममा पत्रकारहरूलाई इरानका तर्फबाट प्रष्टरूपमा उक्साउने खालका कदम देखेको र आफूहरूमाथि हुने कुनै प्रकारको हमलाका लागि उसलाई नै जिम्मेवार ठहर्याउने बताए।
अमेरिका गत वर्ष इरानसहित ६ देशबीच भएको परमाणु सन्धीबाट बाहिरिएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त सम्झौता रद्द गर्नुको कारण सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा भएको उक्त सन्धीबाट आफू खुसी नभएको बताएका थिए ।
साथै अमेरिकाले यमन र सिरिया युद्धमा इरानको भूमिकाको आलोचना पनि गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले नयाँ सम्झौताका लागि इरानलाई बाध्य पार्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ। यस दायरामा इरानको परमाणु कार्यक्रम मात्र नभई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम पनि हुनेछ ।
अमेरिकाले यसबाट मध्यपूर्वमा इरानको अशिष्ट व्यवहार पनि नियन्त्रित हुने बताएको छ भने इरानले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई गैरकानुनी बताइरहेको छ ।